राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्किएलगत्तै प्रचण्डले एकाएक किन बोलाए हाइकमाण्ड बैठक ? यस्तो छ तयारी — Sanchar Kendra
राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्किएलगत्तै प्रचण्डले एकाएक किन बोलाए हाइकमाण्ड बैठक ? यस्तो छ तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीलाई भेटेर फर्किएका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकाएक पार्टी हाइकमाण्ड अर्थात् सचिवालय बैठक बोलाएका छन्। गत बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमा पनि प्रचण्डले पार्टी बैठक चलाउन सक्ने र एकताको बाँकी काम पूरा गर्ने निर्णय गरेपछि प्रचण्डलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने अधिकार दिएको थियो।
त्यसकारण पनि प्रचण्डले सोमबार बस्न लागेको बैठकमा १५ महिनापछि अध्यक्षता ग्रहण गर्नेछन् । खासमा प्रवास कमिटी, छ महानगरको अध्यक्ष र सचिव तथा बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनबारे छलफल गर्न बैठक डाकिएको प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। ‘बैठक भोलि सोमबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराही बस्नेछ’, उनले भने। यसअघि पार्टी सचिवालयको बैठक दुवै अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा हुँदै आएको थियो। ओली र प्रचण्डले यसअघिका बैठकहरू सहअध्यक्षतामा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। उपचारको सिलसिलामा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंगापुरमा छन्।
ओली उपचारका लागि सिंगापुर गएको ३ दिन नबित्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । प्रचण्डले राष्ट्रपतिसमक्ष भेटवार्ता गरेको विषय बाहिर आएपछि सत्तारुढ दलका एक नेताले भने- ‘उहाँ राष्ट्रपति ज्यूले नेकपाका नेताको कार्यविभाजनका विषयमा चासो दिनुभएको थियो । त्यहि विषयमा कुराकानी भएको हुनुपर्छ ।’ उता सीतलनिवास स्रोतले भने नेकपाका नेताको कार्यविभाजन र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आइतबारदेखि नै सुरु भएको स्वास्थ्य उपचारका विषयमा कुराकानी भएको बताएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सतहमा आएको प्रधानमन्त्री ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीचको समस्याका बारेमा पनि प्रचण्डसँग चासो राखेकी थिइन् । राष्ट्रपति–प्रचण्डबीच अन्य विविध विषयमा कुराकानी भएको बताइए पनि बिषय सार्वजनिक गरिएकाे छैन् । यसअघि प्रचण्डले नीजि निवास खुमलटारमा नेता नेपालसँग सोही विषयमा कुराकानी गरेका थिए । नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेरै सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारी र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीचको यो भेटघाटलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।